Tag: 301 | Martech Zone
Chitatu, Kurume 24, 2021 China, Kurume 25, 2021 Douglas Karr
Paunoita chikumbiro chekero mubrowser, akateedzana ezviitiko anoitika nenyaya ye microseconds: Unonyora kero ne http kana https uye rova ​​kupinda. Iyo http inomiririra hypertext yekuchinjisa protocol uye inoendeswa kune dura rezita dura. Https ndiko kubatana kwakachengeteka uko iyo inomiririra uye bhurawuza inoita kukwazisana uye kutumira data rakanyorwa. Iro dura rezita dura rinotarisa kumusoro uko kunongedzerwa nedomeini
Iyo redirection plugin yakavakirwa yeWordPress inzira inoshamisa yekuronga nekutarisira redirects. Ini ndinoishandisa pane ino saiti uye ndakaronga mapoka angu ekudzoreredza ekuvandudzwa ezvinyorwa, zvekubatana zvinongedzo, kurodha pasi, nezvimwe zvakadaro, zvakadaro, ndakamhanyira mune rakasarudzika dambudziko apo ini ndine reverse proxy yakagadzirirwa mutengi iyo WordPress iri kumhanya munzira … Asi kwete mudzi wesaiti. Iyo yekutanga saiti iri kumhanya paIIS mu